ကွန်ဒို in Lisle
ကွန်ဒို in Illinois
ကွန်ဒို in Airport Heights
ကွန်ဒို in Anchorage
ကွန်ဒို in Alaska
ကွန်ဒို in Barrel
ကွန်ဒို in Glendale
ကွန်ဒို in Arizona
ကွန်ဒို in Melrose
ကွန်ဒို in Boynton Beach
ကွန်ဒို in Florida
ကွန်ဒို in Franklin
ကွန်ဒို in Massachusetts
1 - 10 ၏ 801036 စာရင်းများ
Condo For Sale In Lisle, Illinois
HUGE GORGEOUS3BEDROOM,21/2 BATH 2-STORY DUPLEX CONDO IN FOUR LAKES. ALL NEW, ENJOY THE LUXURY LIVING FOR AFFORDABLE PRICE, 1ST FLOOR INCLUDES FORMAL LIVING ROOM W/EXPOSED BRICK WALL W/WOOD BURNING FIREPLACE and EASTERN AMAZING VIEW. BIG PATIO OFF LIVING ROOM. BEAUTIFUL WHITE SHAKER CABINETS WITH...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1510 Sq feet | 0.459 Acre
Lisle in Illinois (United States), 60532
ထုတ်ဝေသည် Core Realty Investments, Inc
မြင်ကွင်း ကွန်ဒို ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
Condo For Sale In Anchorage, Alaska
Updated townhouse in UMed District Anchorage! This home includes two beds and one bath, with an open concept layout. The kitchen includes an island withasink, breakfast bar, and informal open dining area. The living area hasawood burning fireplace and access to the fenced backyard. Master bedroo...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး | 940 Sq feet
Anchorage in Alaska (United States), 99508
ထုတ်ဝေသည် Precision Real Estate Branch Office
Condo For Sale In Glendale, Arizona
This 2br 1ba condo has tile flooring throughout and recently renovated Bathroom and Kitchen. New grey countertops in Kitchen with stainless appliances. Occupied to 12/31/21 with very stable tenant. Rent is prepaid to 12/31/[email protected]$1075/mo. Rental comps up to $1, 200/mo. Property interior can be viewed d...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး | 891 Sq feet | 94 Acre
Glendale in Arizona (United States), 85302
Condo For Sale In Boynton Beach, Florida
Perfect opportunity to own this beautiful2bedroom Venetian Isle Villa located in Palm Beach. This gated community featuresalong list of amenities includingaFitness Center, Aerobics Room, Sitting/Visiting Area, Billiard Room, Library, Theatre, Sauna, Ballroom and more. Home featuresaspacious ...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1363 Sq feet | 0.073 Acre
Boynton Beach in Florida (United States), 33472
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams Realty Boca Raton
Condo For Sale In Franklin, Massachusetts
Open House Saturday September 25 from 11AM-1PM. Highly Desirable Two Car Garage Unit at Spruce Pond Village with Tranquil Views and Finished Walkout Basement! Come see this awesome home withafully finished walkout lower level with Family Room, Media Room and Game Room! Open floor plan has fresh pa...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 2736 Sq feet
Franklin in Massachusetts (United States), 02038
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams Premier Properities
တစ်ယူနစ်သည်အိမ်ေထာင်စုတစ်စု၏လူနေရပ်ကွက်များနှင့်ညီမျှသည့်အိမ်ေထာင်စုဖြစ်သည်။ Australiaစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်အများအားဖြင့်စကားပြောသောအခါ“ ယူနစ်” ဟူသောစကားလုံးသည်အိမ်ရာကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါများသောအားဖြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသည်တစ်ထပ်သို့မဟုတ်တစ်ထပ်သို့မဟုတ်ထပ်ထပ်အဆောက်အအုံများ ('အထပ်တစ်ခု') တွင်တည်ရှိသည်။ အိမ်ရာအုပ်စုတစ်စုသည်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောထပ်တိုက်အဆောက်အ ဦး များတွင်တည်ရှိသည့်ဗီလာယူနစ်သို့မဟုတ်အိမ်ယူနစ်၊ များသောအားဖြင့်ကားလမ်းပတ်ပတ်လည်တွင်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့နောက်အခန်းတစ်ခန်းသည်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပါ ၀ င်သည့်အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်အလားတူနေအိမ်များအတွင်းပူးတွဲ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စသို့မဟုတ်သီးသန့်ဖယ်ထားနိုင်သောကျိုးနွံသည့်အတိုင်းအတာများရှိသည်။ သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်နေထိုင်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ အခန်းတစ်ခန်းတစ်ခန်းကိုစတိုးစတူဒီယိုသို့မဟုတ်အိပ်ရာခင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးမြောက်အမေရိကရှိ Single Room Occupancy သို့မဟုတ် SRO ဟုလူသိများကြသည်။ လူနေအိမ်ရာပေါင်းစုံတည်ဆောက်မှုအချို့ကိုတိုက်ခန်းများသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများဟုခေါ်သည့်အဆောက်အအုံများအဖြစ်ခွဲခြားခြင်း၏လက္ခဏာများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကအသုံးအနှုန်း၏အတန်းအတိုင်းအတာရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်အမျိုးသားစာရင်းအင်းအေဂျင်စီစာရင်းအင်းကနေဒါသည်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုတိုင်းတွင်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကနေအိမ်အရေအတွက်ကိုရေတွက်သည်။ ထိုအချိန်က၎င်းတို့အား "နေအိမ်များ" ဟုလူသိများပြီးအိမ်တစ်အိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတည်းကိုပင်ညီမျှစွာရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ နေ့စဉ်ကနေဒါအင်္ဂလိပ်တွင် "ယူနစ်" ကိုတိုက်ခန်းများနှင့်ကွန်ဒိုမီနီယံများအတွက်ထီးအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။